အပူလောင်တဲ့အခါ သွားတိုက်ဆေး လိမ်းခြင်းကဲ့သို့ အိမ်တွင်း ဆေးနည်းများက အလွန်အန္တရာယ်များနိုင် - CeleLove
တစ်ခုခု ထိမိ ခိုက်မိပြီဆိုရင် အလွယ်တကူ ကုသနိုင်မယ့် အိမ်တွင်း ဆေးနည်းတွေက အများကြီး ရှိပါတယ် ။ အိမ်တွင်း ဆေးနည်းတွေအတိုင်း လိုက်လုပ်တာဟာ တစ်ခါတလေမှာ မကောင်းပါဘူး ။ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ အန္တရာယ်အများကြီး ရှိလာနိုင်ပါတယ် ။ မကြာခင်ကပဲ မလေးရှားနိုင်က ဆရာဝန် Dr Kamarul Ariffinက အပူလောင်ရင် အိမ်မှာဘာလုပ်သင့်လဲ ဆိုတဲ့အကြောင်း Twitter မှာ တင်ခဲ့ပါတယ် …။
အိမ်မှာ အပူလောင်ရင် သွားတိုက်ဆေး ၊ ကြက်ဥ ၊ ကြာညို့ ၊ ဂျုံစတာတွေ လိမ်းဖို့ အိမ်သူ အိမ်သားတွေက ဖြစ်ဖြစ် ၊ အိမ်နီးနားချင်းတွေကပဲ ဖြစ်ဖြစ် အကြံ ပေးတတ်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုနည်းလမ်းတွေက အန္တရာယ်များကြောင်း Dr Kamarul က သတိပေးထားပါတယ်။ လူတစ်ယောက်က လက်မှာ ဆပူလောင်ပြီး သွားတိုက်ဆေးတွေကို အပူလောင်တဲ့နေရာမှာ လိမ်းခဲ့ပါတယ် ။ ကံမကောင်းချင်တော့ လက်က ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ရောင်ကိုင်းလာခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီဓာတ်ပုံကို Dr Kamarul က Twitter မှာတင်ခဲ့ပါသေး တယ် …။
အိမ်တွင်း ဆေးနည်းတွေ သုံးခြင်းက ဆိုးဝါးတဲ့ ရောင်ရမ်းမှုတွေကို ဖြစ်စေပြီစ ရောဂါပိုးတွေလည်း ဝင်နိုင်တယ်လို့ Dr Kamarulက ပြောပါတယ် ။ အပူလောင်ခြင်းကို အဆင့်သုံးဆင့်ခွဲ နိုင်ပါတယ် ။ ပထမ အဆင့်မှာဆိုရင် နာကျင်ခြင်း ၊ နီရဲခြင်းတွေ ဖြစ်ပြီး ရည်ကြည်ဖုမထပါဘူး ။ ဒုတိယအဆင့်မှာ ရည်ကြည်ဖုထခြင်း ၊ နာကျင်ခြင်း ၊ နီရဲလာခြင်းတွေ ဖြစ်ပါတယ် ။ တတိယအဆင့်မှာ အရေပြားက အဖြူရောင် ပြောင်းသွားပြီး သားရေလို မာကြမ်းပျဉ်းတွဲလာပါတယ် ။ တတိယအဆင့် ရောက်တဲ့အခါ နာဗ်ကြောတွေက ပျက်ဆီးသွားလို့ နာကျင်မှုကို မခံရတော့ပါဘူး ။ အိမ်တွင်းဖြစ် ဆေးနဲ့ ကုသတာက ပိုပြီး အန္တရာယ် များလှ ပါတယ်နော် …..
1. စိတ်ကို ငြိမ်ငြိမ်ထားပါ …။
2. အပူလောင်တဲ့ နေရာမှာ လက်ဝတ်တန်ဆာတွေ ၊ အဝတ်အစားတွေရှိရင် ချွတ်ပစ်လိုက်ပါ …။
3. အပူလောင်တဲ့ နေရာကို ရိုးရိုးရေနဲ့ 10 မိနစ် ၊ မိနစ် 20 လောက် ကပ်ထားပေးပါ ။ အဲဒီအခါ ရေကြည်ဖု မထတော့ပါဘူး ။ ရေခဲတွေ ၊ ရေခဲရေတွေ ကပ်ခြင်းက အနာပျောက်ဖို့ ကြန့်ကြာစေလို့ လုံးဝ မသုံးသင့် ပါ ဘူး …။
4. ရေကြည်ဖု ဖြစ်လာရင် ဒီတိုင်းပဲထားပြီး ပေါက်သွားတဲ့ အချိန်ကို စောင့်ကြည့်ပါ ။ ရေကြည်ဖုကို သွား မဖောက်လိုက်ပါနဲ့ ။ အပူလောင်တဲ့ နေရာကို သန့်စင်တဲ့ ပတ်တီးနဲ့ စည်းထားပါ …။
ဒီနည်းလမ်းတွေက လုပ်ရ လွယ်ကူပါတယ် ။ အဆင့်နှစ်နဲ့ အဆင့်သုံးလို ပြင်းထန်တဲ့ အပူလောင်ခြင်းမျိုး ဖြစ်ရင် အနီးဆုံး ဆေးခန်းကို မြန်မြန်သွားပြဖို့ Dr Kamarul က အကြံပေးပါတယ် ။ အပူလောင်တဲ့ ဒဏ်ရာက လက်ဖဝါးထက် ကြီးလာရင် ၊ မျက်နှာပေါ်မှာ အပူလောင်ရင် ဆရာဝန်ဆီ မြန်မြန် သွားသင့်ပါတယ် ။ ပထမအဆင့် အပူလောင်ရင် ရှားစောင်းလက်ပတ် ဂျယ်ကို သုံးနိုင်တယ်လို့ Dr Kamarul က ပြောပြပါတယ်နော် …။ ။
အပူလောငျတဲ့အခါ သှားတိုကျဆေး လိမျးခွငျးကဲ့သို့ အိမျတှငျး ဆေးနညျးမြားက အလှနျအန်တရာယျမြားနိုငျ
တဈခုခု ထိမိ ခိုကျမိပွီဆိုရငျ အလှယျတကူ ကုသနိုငျမယျ့ အိမျတှငျး ဆေးနညျးတှကေ အမြားကွီး ရှိပါတယျ ။ အိမျတှငျး ဆေးနညျးတှအေတိုငျး လိုကျလုပျတာဟာ တဈခါတလမှော မကောငျးပါဘူး ။ နောကျဆကျတှဲ အနနေဲ့ အန်တရာယျအမြားကွီး ရှိလာနိုငျပါတယျ ။ မကွာခငျကပဲ မလေးရှားနိုငျက ဆရာဝနျ Dr Kamarul Ariffinက အပူလောငျရငျ အိမျမှာဘာလုပျသငျ့လဲ ဆိုတဲ့အကွောငျး Twitter မှာ တငျခဲ့ပါတယျ …။
အိမျမှာ အပူလောငျရငျ သှားတိုကျဆေး ၊ ကွကျဥ ၊ ကွာညို့ ၊ ဂြုံစတာတှေ လိမျးဖို့ အိမျသူ အိမျသားတှကေ ဖွဈဖွဈ ၊ အိမျနီးနားခငျြးတှကေပဲ ဖွဈဖွဈ အကွံ ပေးတတျကွပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုနညျးလမျးတှကေ အန်တရာယျမြားကွောငျး Dr Kamarul က သတိပေးထားပါတယျ။ လူတဈယောကျက လကျမှာ ဆပူလောငျပွီး သှားတိုကျဆေးတှကေို အပူလောငျတဲ့နရောမှာ လိမျးခဲ့ပါတယျ ။ ကံမကောငျးခငျြတော့ လကျက ရုပျပကျြဆငျးပကျြ ရောငျကိုငျးလာခဲ့ပါတယျ ။ အဲဒီဓာတျပုံကို Dr Kamarul က Twitter မှာတငျခဲ့ပါသေး တယျ …။
အိမျတှငျး ဆေးနညျးတှေ သုံးခွငျးက ဆိုးဝါးတဲ့ ရောငျရမျးမှုတှကေို ဖွဈစပွေီစ ရောဂါပိုးတှလေညျး ဝငျနိုငျတယျလို့ Dr Kamarulက ပွောပါတယျ ။ အပူလောငျခွငျးကို အဆငျ့သုံးဆငျ့ခှဲ နိုငျပါတယျ ။ ပထမ အဆငျ့မှာဆိုရငျ နာကငျြခွငျး ၊ နီရဲခွငျးတှေ ဖွဈပွီး ရညျကွညျဖုမထပါဘူး ။ ဒုတိယအဆငျ့မှာ ရညျကွညျဖုထခွငျး ၊ နာကငျြခွငျး ၊ နီရဲလာခွငျးတှေ ဖွဈပါတယျ ။ တတိယအဆငျ့မှာ အရပွေားက အဖွူရောငျ ပွောငျးသှားပွီး သားရလေို မာကွမျးပဉျြးတှဲလာပါတယျ ။ တတိယအဆငျ့ ရောကျတဲ့အခါ နာဗျကွောတှကေ ပကျြဆီးသှားလို့ နာကငျြမှုကို မခံရတော့ပါဘူး ။ အိမျတှငျးဖွဈ ဆေးနဲ့ ကုသတာက ပိုပွီး အန်တရာယျ မြားလှ ပါတယျနျော …..
1. စိတျကို ငွိမျငွိမျထားပါ …။
2. အပူလောငျတဲ့ နရောမှာ လကျဝတျတနျဆာတှေ ၊ အဝတျအစားတှရှေိရငျ ခြှတျပဈလိုကျပါ …။
3. အပူလောငျတဲ့ နရောကို ရိုးရိုးရနေဲ့ 10 မိနဈ ၊ မိနဈ 20 လောကျ ကပျထားပေးပါ ။ အဲဒီအခါ ရကွေညျဖု မထတော့ပါဘူး ။ ရခေဲတှေ ၊ ရခေဲရတှေေ ကပျခွငျးက အနာပြောကျဖို့ ကွနျ့ကွာစလေို့ လုံးဝ မသုံးသငျ့ ပါ ဘူး …။
4. ရကွေညျဖု ဖွဈလာရငျ ဒီတိုငျးပဲထားပွီး ပေါကျသှားတဲ့ အခြိနျကို စောငျ့ကွညျ့ပါ ။ ရကွေညျဖုကို သှား မဖောကျလိုကျပါနဲ့ ။ အပူလောငျတဲ့ နရောကို သနျ့စငျတဲ့ ပတျတီးနဲ့ စညျးထားပါ …။
ဒီနညျးလမျးတှကေ လုပျရ လှယျကူပါတယျ ။ အဆငျ့နှဈနဲ့ အဆငျ့သုံးလို ပွငျးထနျတဲ့ အပူလောငျခွငျးမြိုး ဖွဈရငျ အနီးဆုံး ဆေးခနျးကို မွနျမွနျသှားပွဖို့ Dr Kamarul က အကွံပေးပါတယျ ။ အပူလောငျတဲ့ ဒဏျရာက လကျဖဝါးထကျ ကွီးလာရငျ ၊ မကျြနှာပျေါမှာ အပူလောငျရငျ ဆရာဝနျဆီ မွနျမွနျ သှားသငျ့ပါတယျ ။ ပထမအဆငျ့ အပူလောငျရငျ ရှားစောငျးလကျပတျ ဂယျြကို သုံးနိုငျတယျလို့ Dr Kamarul က ပွောပွပါတယျနျော …။ ။